ပယ်ဖျက်တန်ဖိုးမြင့်ငွေစက္ကူများ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်စိမ့်မြေတောတွင် ပြန်လည်တွေရှိ – H2Oupdatenews
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ရဲတပ်ဖွဲ့သည် လှို့ဝှက်စွာ ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ငွေစက္ကူတန် အမြောက်အများ ကို ဘိုဂရာဒေသတွင် ထရပ်ကားတစ်စီးနှင့် အနီးရှိ စိမ့်မြေအတွင်းမှ အတွင်းမှ သိမ်းဆည်းရမိသည်။ အဆိုပါငွေစက္ကူများမှာ ဖျက်ဆီးရန်ညွှန်ကြားခဲ့သော ငွေစက္ကူများဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ဘဏ်က ပြောဆိုသည်ဟု Dhaka Tribune က ယနေ့ရေးသားသည်။
အင်္ဂါနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ထရပ်ကားကို ရှိုဝါဘီစိမ့်မြေအနီး ချန်ဒိုင်းရွာသို့သွားရာလမ်းပေါ်တွင် တွေ့ရှိရ ခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းကားမှာ ရှာဂျဟန်ပူစည်ပင်သာယာအဖွဲ့ပိုင်ဖြစ်ကြောင်း ငွေစက္ကူများအား ဖျက်ဆီး ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သူ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ဘဏ် ဘိုဂရာဇုံ အမှု့ဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးက ပြောဆိုသည်။
ထရပ်ကားမောင်းသူသည် အခင်းဖြစ်ပွားရာအနီးရှိရွာတွင် နေထိုင်သူဖြစ်၍ ကားကို ၄င်းနေရာ၌ ရပ် ထားလေ့ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
စိမ့်မြေအတွင်း စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထောက်၏ အမေးကို ဖြေကြားရာတွင် ဖျက်ဆီးပြီး ဘဏ်စက္ကူများ စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် မီးရှို့ခြင်း နည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြောင်း၊ ယခုငွေ စက္ကူများမှာ အရည်အသွေးစံမမီ-မှားယွင်းသည့်အတွက် ပယ်ဖျက်ငွေစက္ကူများအနက် အချို့ဖြစ် ကြောင်း၊ ဖြတ်တောက်ဖျက်ဆီးပြီး ငွေစက္ကူများကို ဒေသန္တရစည်ပင်သာယာမှတစ်ဆင့် စွန့်ပစ်စေရန် ညွှန်ကြားခဲ့ရာ ၄င်းတို့က စိမ့်မြေအတွင်း စွန်ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမှု့ဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးက ရှင်းပြသည်။
ယနေ့နံနက်စောစောပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလားဘဏ်က ထုတ်ဝေသည့် တာကာ ၁၀ဝ၀ တန်၊ ၅၀ဝ တန်နှင့်၊ ၁၀ဝ တန်ငွေစက္ကူများကို တွေ့ရှိရခြင်းမှန်ကန်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
(( အဖွဲ့အစည်းအချို့တွင် အသုံးမလိုတော့သည့် ရုံးစာများကို ခုတ်စင်းဖြတ်တောက်ခဲ့ရလျှင် မီးရှို့၍ အကုန်အစင်ပြာကျသည်အထိ အနီးတွင် တာဝန်ရှိသူက စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးမှ စွန့်ပစ်ရမည်ဟု စည်းကမ်း လုပ်ထုံး သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိပါသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
( စက်တင်ဘာ – ၂၆၊ ၂၀၁၉ ) ((( Dhaka Tribune ., September 24th, 2019, ” Rejected Bangladesh Bank notes found in Bogra marshland.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျှော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
Rejected Bangladesh Bank notes found in Bogra marshland
Published at 02:10 pm September 24th, 2019
BB officials says 240 rejected notes were instructed to be destroyed
Police have recovered huge cache of shredded Bangladesh Bank notes fromatruck andanearby marshland in Shahjahanpurupazila in Bogra.
The truck was found at the Chandai village road, next to Khowar Bill (marshland) in the upazila on Tuesday morning.
The truck belongs to the Shajahanpur municipality, who was instructed to dispose of the currencies, Bangladesh Bank Bogra Zone Executive Director Jagannath Ghosh said.
According to the correspondent, the truck driver Masum lives nearby from the scene and parked the truck at that place.
When asked about dumping the banknotes in marshland, Jagannath replied: “We follow two ways. We either dump the banknotes or burn them.”
He also mentioned that they had 1,800 rejected notes and off them 240 were asked to dump by the local municipality, instead they put those notes in the marshland.
Earlier in the day, police found Bangladesh Bank currency of Tk1,000, Tk500 and Tk100 notes, all of them shredded into pieces.
Shahjahanpur Police Station officer-in-charge (OC) (Investigation) AdulKalamk Azad confirmed the matter to Dhaka Tribune
Previous Previous post: မြန်မာနိုင်ငံအား R2P ရန် ကျင်းပဆဲ ကုလအထွေထွေညီလာခံက မဲခွဲဆုံးဖြတ်သည်ဆိုသော သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ဆဲ၊ ဖြစ်နိုင်သည်များကို တင်ပြရလျှင်
Next Next post: ဟောင်ကောင်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကို အမေရိကန်လွှတ်တော်က အတည်ပြု၍ “ အစွန်းရောက်ရဲဆေးတင်ပေးခြင်း” အဖြစ် ဒေါသူပုန်ထနေသော တရုတ်က ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချ